I-Insync | Eyedwarha 2021
Iincwadi ezili-15 zeNoveli eziBalaseleyo zaBabhali baseIndiya
IiMills & Boons ziyafumaneka eIndiya kodwa siyayithanda into esisi desiki nakumabali ethu othando. Ke zeziphi ezona noveli zothando zibhalwe ngababhali baseIndiya? Funda uqhubeke.
Ngaba ubusazi ukuba oontakumba banokuqikelela ikamva lomntu?
Ngaba uyazi ukuba ukuwa kwamacikilishe kumalungu omzimba wakho kungazityhila izinto ngekamva lakho?
Isikhumbuzo sokuqala somtshato, iminqweno, imiyalezo kunye nemifanekiso yokwabelana
Isikhumbuzo sokuqala somtshato sihlala sikhethekileyo kwizibini ezibhiyozelayo. Isikhumbuzo sokuqala komtshato sihlala sikhethekileyo kwizibini ezitshatayo. Ke ukuba o ukuba uyazi isibini esiza kubhiyozela isikhumbuzo seminyaka yabo yokuqala kule minyaka izayo, silapha kunye neekowuti, iminqweno kunye nemiyalezo ekufuneka sabelane ngayo.
Isilivere yeSikhumbuzo: Iminqweno yama-25 yoMtshato, iiNqaku kunye neMifanekiso yeZibini ezitshatileyo
Yintoni enokonwaba kwisibini esitshatileyo ngaphandle kokubhiyozela iminyaka engama-25 yobunye? Ukuba uyasazi isibini esinjengalesi ukuba sonke siyonwabele iminyaka yabo yesilivere ungabelana ngezi zicaphulo, imiyalezo kunye neminqweno nabo.
Uluhlu lweeLwimi eziNdala eMhlabeni
Ubusazi ukuba ezi zezona lwimi zidala emhlabeni kwaye zisathethwa? Jonga uluhlu!
Usuku lokuzimela 2020: Hlaziya ukuKhangela kwakho kolu Suku lukhethekileyo
Lo mhla wama-73 wenkululeko ka-2015, nxiba ngendlela ethandekayo ukubhiyozela olu suku lukhethekileyo. Nazi iimbono zosuku olunomdla kubantu abadala nakubantwana. Ngokuqinisekileyo abantu baya kujika babe ziintloko naphi na apho uya khona.
I-Independence Day 2020: Ukubaluleka Kwemibala Emithathu Kwiflegi Yethu Yesizwe
Rhoqo ngonyaka ngoSuku lweNkululeko kunye nosuku lweRiphabliki, iflegi yeSizwe iphakanyiswa yiNkulumbuso kunye noMongameli welizwe lethu. Ngalo Suku lweNkululeko, siza kukuxelela ukubaluleka kweetrikololi kwiFlegi yeSizwe.
'Ngaba Uthando Lunokwenzeka Kabini' Ukuphononongwa Kweencwadi
Ngaba uthando lunokwenzeka kabini? URavinder Singh, umbhali, wamkela uthando okwesibini ebomini bakhe. Kodwa, kukho ukujija okukhulu okumophulayo.
Ingubo ka-Alia Bhatt kwi-HSKD yokunyusa
IAlla Bhatts ikhabethe lokunyuselwa kukaHumpty Sharma Ki Dulhania ibe ngumxube olungileyo. Jonga u-Alia Bhatt ngezinxibo ezimfutshane, ii-maxis, iidenim kunye neempahla zaseIndiya
Amaphupha Enyoka Ngexesha lokukhulelwa Unomyalezo Oyimfihlo!
Ngaba uyazi ukuba ukubona inyoka ephupheni lakho ngexesha lokukhulelwa kuthetha oku?
Ngaba iLizard liqikelela njani ikamva lakho?
Apha, kweli nqaku, siza kwabelana ngezinye zeenkolelo abantu abanazo malunga nokuwa kwamacikilishe kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba.
Inzala yesi-8 yeyona Inja ikhohlakeleyo elizweni
Sijonge ezona zinja zi-8 zinoburhalarhume ekunyukeni komyalelo woburhabaxa. Funda ...
Usuku looTitshala 2019: Ezembali nokubaluleka koSuku looTitshala; Iingcaphuno zikaGqirha Sarvepalli Radhakrishnan
Rhoqo ngonyaka nge-5 Septemba, kubhiyozelwa uSuku looTitshala ukukhumbula isikhumbuzo sokuzalwa kukaGqirha Sarvepalli Radhakrishnan.
Iincwadana ezingama-20 eziBalaseleyo zesiNgesi ngababhali baseIndiya
Ezona noveli zibalaseleyo zababhali baseIndiya zinokuba luluhlu olude. Ezona ncwadana zibalaseleyo zesiNgesi ngababhali baseIndiya ababethathwe nguBoldsky zezi ..
Umhla weRiphabhlikhi ka-2021: iiSlogans ezikhuthazayo kunye neeKowuti ngooMbutho weNkululeko
Qho ngonyaka ngelixa isizwe sibhiyozela umhla wama-26 kweyoMqungu njengoSuku lweRiphabliki, abantu bayalikhumbula igalelo elingenakuthelekiswa nanto labalweli benkululeko ababesilwa noMkhosi waseRaj. Kulo nyaka silapha kunye neengcaphuno kunye neziqubulo zabalweli benkululeko.
Imiyalezo evuyisayo kunye neminqweno yokwabelana ngokuzalwa komntwana oyintombazana
Ngaba usandul 'ukwamkela usana oluyintombazana kusapho lwakho kwaye awukwazi nje ukuhlala uzolile? Okanye ngaba umntu osondele kuwe usikelelwe ngomntwana oyintombazana? Ukuba ewe, skrolela ezantsi kwinqaku ukuze wabelane ngemiyalezo evuyisayo esuka entliziyweni.
M S Dhoni-uSakshi uthanda uBomi noMtshato
M S Dhoni kunye noSakshi bathanda ibali kunye nobomi babo emva komtshato.
Uluhlu lwabadlali beqakamba kunye nabafazi babo Ukwabelana ngomahluko omkhulu wobudala
Umsantsa wobudala phakathi kwabanye beqakamba kunye nabafazi babo ungakushiya wothukile.
Usuku lweHlabathi lokuLwa uRhwaphilizo 2020: Iziqubulo kunye neekowuti eziza kukukhuthaza ukuba uthathe inyathelo
Usuku lweHlabathi lokuLwa uRhwaphilizo lusasaza ulwazi malunga nokuba urhwaphilizo, umba wentlalo nezopolitiko ungalonakalisa njani uqoqosho loluntu nelizwe. Namhlanje, akukho lizwe okanye mmandla ungafumaneki kurhwaphilizo.
Umvuzo wabaSebenzi bakaMukesh Ambani uya kukwenza uzive ulihlwempu
Ucinga ukuba uthini umvuzo wabasebenzi bendlu kaMukesh Ambani? Iphakheji yaba basebenzi iya kothusa, kuba iyindlela kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iinjineli zesoftware kweli lizwe.
Umsebenzi we-govt kulayini wesandla
ubufumana njani ubungakanani obunguziro ekhaya
Izibonelelo zokusebenzisa amanzi anyukayo ebusweni
ukutya ukonyusa inani leplatelet kwidengue
u-kareena kapoor ukunciphisa umzimba emva kokubeleka
Izibonelelo zejeera ekwehliseni ubunzima bomzimba